Sidee bay kula tahay in Soomaalidu ka yeesho xaalka madixii hore ee sirdoonka al-Shabaab Sakariye Ismaaciil Axmed Xirsi?
Baddalaadda Xoghayaha Golaha Xukuumadda Kenya ee Arrimaha Gudaha iyo Xiriirka Xukuumadda Qaran Joseph Ole Lenku iyo Isbatooraha Guud ee Bilayska David Kimaiyo ma hagaajin kartaa xaaladda guud ee ammaanka dalka?
Maxaa kugu dhiirri-galiya in aad mas'uuliyiinta amniga ku wargaliso falalka laga shakiyo ama xubnaha loo malaynayo in ay ka tirsan yihiin ee al-Shabaab?
Iyada oo aan faragalin shisheeye iman madaxweynaha iyo ra'iisul-wasaaraha Soomaaliya ma awoodaan in ay si guul ah u xalliyaan khilaafkooda?
Illaa iyo xadkee baad ku kalsoon tahay in xukuumadaha Bariga Afrika ay tallaabooyin waafi ah u qaadayaan ka hortagga dillaacidda Ebola?
Kenya ma la gudboon tahay in ay qabato afti looga hadlayo arrimaha qara ee muhiimka u ah sida kharashka dawladda iyo amniga?
Al-Shabaab ma ku badbaadi doontaa hoggaanka Axmed Cumar iyadoo isku xiran kadib dhimashadii Axmed Cabdi Godane?
Maxay kulatahay khatarta ugu weyn ee hortaal Bariga Afrika maanta?
Maxay kula inay tahay natiijadii ugu muhiimsaneeyd ee ka soo baxday Shir-madaxeedkii Hoggaamiyayaasha Maraykanka iyo Afrika?
Illaa iyo heerkee bay dawladda Soomaaliya baylah ugu tahay basaasiinta al-Shabaab marka la eego weerarkii dhawaan lagu qaaday Villa Soomaaliya?
Yaad u maleeynaysaa in ay ka dambeeyeen weerarradii dhawaan ka dhacay Gobolka Lamu?
Xukuumaddu ma tahay in ay kuwa ka soo goosta al-Shabaab ula dhaqanto si adag oo qorsheeysan?
Iscasillaadda Wasiirka Amniga Qaranka Cabdikariim Xuseen Guuleed saameeyn ma ku yeelan doontaa ammaanka Soomaaliya?
Kenya ma la gudboon tahay in ay ciidamadeeda kala baxdo Soomaaliya sifo ay argagixisada ugula dagaallanto gudaha?
Marka aad eegto weerarrada argagixisonimo ee soo noqnoqonaya Kenya, ma u maleeynaysaa xarigga baahsan ee shacabka iyo guud ahaan qabqabashada ammaan in loo qiil heli karo?
Dhacdooyinkii ammaan ee dhawaan ka kala dhacay Mombasa iyo Nairobi sida ay u badan tahay waxay ka dhasheen:
Illaa iyo xadkeebaad ku kalsoon tahay in duqa cusub ee Muqdisho uu wax uga qaban karo xaaladda ammaan ee caasimadda Soomaaliya?
Maxay mamnuucidda al-Shabaab ee Internet-ka uga dhigan tahay kooxda?
Maxay ka dhigantahay dib-u-gurashada markhaatiyaasha dhawrka ah ee ka noqday dacwada Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC) ee ka dhanka ah Madaxweyne Uhuru Kenyatta?
Malaga yaabaa in khibraddii siyaasadeed ee hore ee madaxweynaha cusub ee Puntland ay gacan ka gaysato qaddiyadda federaaliisamka Soomaaliya?
Maxad u maleeynaysaa inay tahay caqabadda ugu weyn ee soo food-saari doonta Kenya 50-ka sano ee soo socota
Shaqo ka eryidda Ra'iisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon maxay saamayn ku yeelan doontaa dimuqraadiyadda Soomaaliya?
Maxay tahay xaaladda al-Shabaab marka laga cabbir qaato kordhinta ciidamada AMISOM?
Ma kula tahay in xukuumaddu la haato xaqa ay xurumaha warbaahineed ugu xiri karto sababo la xiriira maqaallo ama warar xambaarsan "kicin" ama "naqdin"?
Siday kula tahay qaabkii ay ciidamada ammaanka Kenya u maareeyeen go'doomintii suuqa Westgate ee Nairobi?
Sidee baad u aragtaa mooshinka ay Kenya uga baxayso Maxkamadda Caalamiga ah ee Dambiyada (ICC))?
Maxay kula tahay saameeynta ay Soomaaliya ku yeelan doonto ka bixitaanka Dhakhaatiirta aan Xudduudda Lahayn (MSF)?
Maxaa kala gudboon in xukuumadda federaaka Soomaaliya ay ka qabato gudniinka fircooniga ah?
Ma haboontahay in ciidamada Kenya ee AMISOM loo wareejiyo meel ka baxsan Kismaayo?
Ma haboontahay in madaxweynayaasha maamul-goboleedyada lagu marti-qaado shirka London ee Soomaaliya?
Maxay tahay in uu Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta siiyo mudnaanta koowaad 100-ka maalmood ee ugu horreeya?
Ma taageersantahay hanaanka federaal gobaleedka ee Soomaaliya?
Natiijada doorashada Kenya matahay mid ka turjumeeysa xorriyad, caddaalad iyo codeyn hufan?
Ma dareensan tahay inaad xog waafi ah ka haysatid doorashooyinka Kenya si aad u qaadatid go'aan xog-ogaalnimo ku dhisan?
Ma u malaynaysaa in doorashada Jabuuti ee 22-ka Febraayo ay dalka u horseedi doonto isbaddal dimuqraadiyadeed?
Ilaa iyo xadkee ayaa dagaal yahaniinta ajnabiga ah ee Soomaaliya jooga ay fahansan yihiin khilaafka ka dhex taagan al-Shabaab iyo Cumar Xammami, oo loo yaqaano Abu Mansuur al-Amriki?
Maxaad is leedahay al-Shabaab waa ay ku dhacayaan 2013-ka?
Sideed ugu kalsoon tahay in ciidamada ammaanka ee Kenya ay u sii hayn karaan awooddooda maamul inta aan la qabanin doorashooyinka bisha Maarso 2013?
Marka la eego hannaanka federaalka ah ee ka jira Soomaaliya, ma kula tahay in madaxda dawlad-goboleedyada ka jira Soomaaliya loogu yeero mansabka madaxweyne?
Yay kula tahay inuu ka dambeeyo dilka wariyeyaasha Soomaaliya?
Maxay ka bixitaanka al-Shabaab ee Kismaayo uga dhigan tahay kooxda maleeshiyada ah?
Ma u malaynaysaa in madaxweynaha cusubi ay tahay in uu wada hadal la bilaabo canaasiirta muwaadiniinta ah ee ku jira al-Shabaab?
Xukuumadda Keenya ma inay taageertaa lacag siinta Maslah, ama "lacag dhiig" si ay u dajiso colaada qabaa'ilka?
Makula tahay in hoggaamiyayaasha xilligan ee Dawladda Federaalka Ku-meel-gaarka ah ee Soomaaliya -- madaxweynaha, ra'iisul-wasaaraha iyo af-hayeenka barlamaanku -- ay ka qayb-qaataan doorashada madaxweynenimo ee soo socota?
Ma kula tahay in dumarku ka qeyb-galaan hay'adaha cusub ee dowladda Soomaaliya?
Ma rumaysantahay in al-Shabaab ay ka dambaysay weerarradii bambooyinka gacanta loo adeegsaday ee dhawaan lagu qaaday Kenya?
Illaa iyo xadkee baad ku kalsoontahay in Golaha Matalaya Degaannada Qaranka uu ansixin doono dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya ka hor xilliga kama-dambaysta ah ee loo qabtay ee 20-ka July?
Illaa iyo xadkee baad rumaysan tahay in diidmadii uu Osama bin Laden diiday in al-Shabaab ay la midoowdo al-Qaacida ay sii ballaarin karto khilaafka kooxda?
Ilaa xadkeed raacsan tahay in hawlgalladii milliteri ee dhawaan lagu qaaday al-Shabaab ay wiiqeen kooxdaasi?
Ilaa xadkeed aaminsan tahay in askaraynta carruurta ee al-Shabaab ay ka soo horjeeddo Islaamka?